NextMping | Bhizinesi Kochi kweVamabhizinesi
NextMping™ kune Mabhizimusi
Isu takasimba muhupfumi hwegig.
Solopreneurs uye vemabhizimusi ndivo ramangwana rebasa. Tsvagiridzo inoratidza kuti panosvika gore 2025 freelancers nevashandi vekontrakiti ichagadzira chikamu chakanaka chevashandi. Upwork yakawana kuti 47% yevaya vakwegura 18-21 yakasununguka mune yekupedzisira gore. Iyo data iri kuratidza kuti nechizvarwa chimwe nechimwe chitsva vanhu vari kusarudza kuva sahwira wavo uye vanomhanyisa kufambira mberi uye kubudirira pamwe negwara rounyanzvi
Kunyangwe iwe watove mushambadzi wakabudirira kana kutarisa kuenda kune yako wega Cheryl Cran uye timu yake inopa bhizinesi makoji maitiro ekukubatsira kuti ubudirire.
Kana paine chinhu chakakosha zvakakwana, kunyangwe mikana irikukukanganisa, unofanira kuzviita. ”
Isu tinobata gore roga roga zviitiko zvevamabhizinesi uko isu tinofungidzira munzvimbo dzakakosha kuratidza ramangwana bhizinesi rako. Izvi zvinosanganisira tekinoroji uye hacks bhizinesi kurerutsa uye kurerutsa kukura kwebhizinesi. Nyanzvi dzevaenzi dzinosanganisira CIO's, maitiro masayendisiti, data sainzi, psychology yevanobudirira nyanzvi uye nezvimwe.
InoteveraMap bhizinesi rako rekukura kwakawedzera
Wese munhu awana hukuru akazviita nerubatsiro. Mabhizimusi makuru saRichard Branson, Sara Blakely, Elon Musk, naLori Greiner vese vane hutungamiriri hwekudzidzisa uye / kana bhizinesi revarairidzi kupa ruzivo, maonero uye mamiriro. Yedu InoteveraMapu ™ yevanamuzvinabhizinesi coaching yakagadzirirwa iwe kune zvako zvakasarudzika zvaunoda. Kuburikidza nemibvunzo uye kuongororwa isu tinogadzira tsika 'Inoteveramap' yako nebhizinesi rako. Isu tinopa 6 mwedzi kana 12 mwedzi bhizinesi makohishi makoji.
Yegore rinoteveraMapa ™ yevanamuzvinabhizinesi chiitiko
Kamwe pagore tinoungana pamwe nemabhizimusi akafanana nemafungiro mune imwe nzvimbo yekudzokera kuti titarise pakugadzira mepu chii chinotevera kwauri sewemabhizimusi uye chii chinotevera kune bhizinesi rako. Mune ino 2-zuva bhizimusi rekuvandudza chiitiko iwe uchanzwa kubva kunevamangwana, Strategiste, tech wizards, vatungamiriri vari mundima yekushanduka kwemafungiro uye nyanzvi bhizinesi varairidzi. Iwe uchasiya ino yekudzoka neako wega 'mepu' yezviito, zvirongwa uye zvikuru zvinonzwika zvinangwa kukubatsira iwe kuita zviri nani pane kufanotaura ramangwana rako rakashinga…. Iwe uchaita mepu.
12 mwedzi unoshamisa kukura kwehunyanzvi chirongwa
Join yedu muvambi, Cheryl Cran kuburikidza nehupenyu live kamwe chete pamwedzi kwemwedzi ye12 uye yekuwana zvirimo kuburikidza nevhidhiyo zvirongwa, nyanzvi bhizinesi kudzidzisa, matemplate, zvishandiso uye zvemahara zviwanikwa. Iwe uchatsvaga nzira nyowani dzekusimudzira bhizinesi rako nekubatanidza kune yakangojekeswa yakashinga yekuona chiratidzo chechido. Iwe unozobatana nevamwe vemabhizimusi vakaita sewe vanozogovana zvakavanzika zvavo zvekubudirira uye izvo zvidzidzo zvinodzidziswa.
Bata isu kuti utorese kusaina
Unoda rubatsiro rwedu?
Tine iwe wakafukidzwa - svikira isu tingangoda kubatana newe.